6 riwaayadood oo dambi ah oo kuu yimid si ay kuu jiiraan | Bezzia
6 buug-gacmeedyo dembi ah oo kuu yimaada inay ku xijiyaan
Maria vazquez | 10/06/2021 12:00 | Wararka
Miyaad jeceshahay inaad aqriso buug-gacmeedka dembiyada? Haddii noocani uu yahay midka adiga kugu maaweelinaya, u fiirso cinwaannada aan maanta kula wadaagno. Lixdaan sheeko-xariir dambiyeed ayaa hada ku dhacay dukaamada buugaagta ama dhawaan ayey imaanayaan, wax ka weeydii! Waxay ku yaalliin deegaanno aad u kala duwan, waxay ballanqaadayaan shaki, dhagar, xiisad ...
1 Nolosha Sirta ah ee Úrsula Bas
2 Saqda dhexe
3 Qoys caadi ah
5 Siddeed dil oo qumman
6 Mid walbaba tiisa
Nolosha Sirta ah ee Úrsula Bas
Qoraa: Arantza Portabales
Úrsula Bas, oo ah qoraa guuleysatay, waxay ku nooshahay nolol umuuqata mid qaawan Santiago de Compostela. Maalin Jimce ah oo bisha Febraayo ah ayuu gurigiisa ka baxaa si uu maktabad uga dhex hadlo, kumana noqdo. Ninkeeda, Lois Castro, ayaa cambaareeyay in la waayey afar iyo labaatan saacadood ka dib. Ularsula, oo weli ku hoos jirta qolka hooseWaxay si fiican u taqaanaa afduubaheeda - oo ah mid kuxiran boggageeda ay u ogolaatay nafteeda in la duubo iyada oo aan loo dulqaadanaynin iska caabin yar - waxayna ogtahay in goor dhow ama ka dib uu dili doono.
Isbatoore Santi Abad, ayaa dib loogu soo celiyey booliska kadib sanad iyo badh fasax dhimirka ah, iyo lamaanihiisa Ana Barroso, oo hada loo magacaabay kuxigeenka kormeere, waxay bilaabeen baaritaan aan kala joogsi lahayn iyadoo la kaashanayo gudoomiyaha cusub, Álex Veiga. Tallaabooyinkaaga oo dhan waxay kuu horseedi doonaan xagga kiis kale oo aan xal loo helin: tii Catalina Fiz, ayaa lagu waayey Pontevedra seddex sano ka hor, iyo dhanka gacan ku dhiigle u muuqda inuu sharciga gacantiisa ku qaadanayo.
Tifatiraha: Daabacadaha B
Hal habeen miyaa calaamadeyn kara aayaha dhammaan intii ku noolayd? In ka badan labaatan sano ayaa ka soo wareegtay markii uu hoos u sii dhacayay xiddigga weyn ee Diego Letamendia markii ugu dambeysay ee uu ku qabtay magaaladiisa Illumbe Taasi waxay ahayd habeen dhammaadka kooxdiisii ​​iyo kooxdii asxaabta ahayd, iyo sidoo kale tii luminta Lorea, saaxiibtiis. Boliiska waligood kuma guuleysan inay cadeeyaan waxa ku dhacay gabadha, oo la arkay iyada oo ka soo baxeysa hoolka xaflada, iyadoo aad moodo inay ka carareyso wax ama qof. Intaa ka dib, Diego wuxuu bilaabay xirfad kali kali ah oo aan dib ugu soo laaban magaalada.
Markii mid ka mid ah xubnaha gaangiska uu ku dhinto dab yaab leh, Diego wuxuu go'aansaday inuu ku laabto Illumbe. Sannado badan ayaa laga soo gudbay oo la midoobida asxaabtii hore way adagtahay: midkoodna wali ma ahan shaqsigii ay ahaayeen. Halka, tuhunka ayaa sii kordhaya in dabku uusan ahayn mid kadis ah. Suurtagal ma tahay in wax walboo xiriir leeyihiin iyo in, waqti dheer kadib, Diego wuxuu raadsan karaa tilmaamo cusub oo ku saabsan wixii ku dhacay Lorea?
Qoys caadi ah
Adam iyo Ulrika, oo ah lammaane caadi ah oo is qaba, ayaa la nool gabadhooda siddeed iyo toban jirka ah ee Stella iyagoo ku nool aag wanaagsan oo ku yaal duleedka Lund. Muuqaal ahaan, noloshiisu waa qumman tahay ... illaa iyo maalin uun dhalanteedkan lagu jaro xididdadiisa goorma Stella waxaa loo xiray inay si xun u dishay nin ku dhowaad shan iyo toban sano ka weyn iyada. Aabbaheed, oo ah wadaad kaniisadda iswiidhish ah oo la ixtiraamo, iyo hooyadeed, oo ah garyaqaan caan ku ah difaaca dambiyada, waa inay dib uga fikiraan astaantooda anshax madaama ay difaacaan oo ay isku dayaan inay fahmaan sababta ay iyada ugu weyn tahay tuhmanaha dambiga. Ilaa intee bay u socon doonaan inay ilaaliyaan gabadhooda? Runtii ma ogtahay sida ay tahay Iyo waliba walwal badan: ma is garanayaan?
Tifatiraha: Daabacadaha Gatopardo
Kalmann Óðinnsson waa asalka ugu badan ee deggen Raufarhöfn, oo ah tuulo yar oo kalluumeysi oo ku taal meelaha ugu caansan ee Iceland. Waa soddon iyo afar jir, autistic ah, in kasta oo ay deriskiisu u arkeen inuu yahay doqon magaalada, isagu waa shariif iskiis isu magacaabay oo ka tirsan bulshada. Dhammaantood waa la xakameynayaa. Kalmann wuxuu maalmihiisa ku qaata kormeerida bannaanka ballaaran ee ku hareeraysan magaalada cidlada ah, ugaarsiga dawacooyinka cirifka leh qorigiisa Mauser oo aan kala sooc lahayn, iyo kalluumeysiga kalluumeysatada Greenland ee qabowga badweynta Arctic. Laakiin, marmarka qaarkood, halyeeygeena ayaa xadhkaha goosta isagaana khatar u noqda naftiisa iyo, laga yaabee, dadka kale ...
Maalin maalmaha ka mid ah, Kalmann wuxuu ogaadaa barkad dhiig ah barafka, oo ku beegan luminta shaki ee Robert McKenzie, ninka ugu qanisan Raufarhöfn. Kalmann waxay ku dhowdahay inay duruufo ka gudbaan, laakiin mahadsanid caqligiisa caqliga xun, qalbi daahirnimadiisa iyo geesinimadiisa, wuxuu muujin doonaa in, sida awoowgiis u sheegay, IQ maahan wax walba oo noloshan. Dhamaan waa la xakameynayaa…
Siddeed dil oo qumman
Shan iyo toban sano ka hor, Malcolm Kershaw oo ah taageere sheeko cusub oo qarsoodi ah ayaa lagu daabacay barta buugaagta buugaagta lagu iibiyo halkaas oo uu ka shaqeeyay wakhtigaas liis - oo aan helin wax booqashooyin ah ama faallooyin ah - taas oo uu aaminsan yahay inay ahaayeen dambiyada suugaaneed ee ugu badan taariikhda lagu qabtay. Wuxuu cinwaan uga dhigay Siddeed Dil oo Wanaagsan oo uu ku soo daray sheekooyin dhowr ah oo ka mid ah magacyada waaweyn ee nooca madow: Agatha Christie, James M. Cain, Patricia Highsmith ...
Taasi waa sababta Kershaw, oo hadda ah carmal isla markaana leh milkiilaha dukaan yar oo madax-bannaan oo ku yaal Boston, markii ugu horraysay la qabto markii wakiil FBI ah uu garaaco albaabkiisa maalinta foosha xun ee Febraayo, isaga oo raadinaya macluumaad ku saabsan taxane ghoulish ah oo dilal aan la xallin oo si isir ah isu eg Kuwa uu ku xushay liistadaas hore ...
Mid walbaba tiisa
Caajis caajis ah farmashiistaha magaalo yar oo Sicily ah ayaa helaya qof aan la aqoon taas oo ay ugu hanjabayaan dil iyo taasna, si kastaba ha ahaatee, muhiimad ma siinayo. Laakiin, maalmo kadib, farmashiistaha waxaa lagu dilay buuraha iyadoo lala dilay nin kale oo deegaanka ka mid ah oo la xushmeeyo, dhaqtarka Roscio. In kasta oo xanta la faafiyay ay sababi karto dhaawac aan laga soo kaban karin, booliska iyo carabinieri-na ay garaacaan indhoolayaasha, kaliya Laurana, oo ah macallin dugsi sare oo caajis ah laakiin dhaqan leh, ayaa raacaya hoggaan horseedi kara gacan ku dhiiglaha. Waxa uu ogaaday in magaca aan la garanayn lagu sameeyay ereyo laga soo jaray wargeys Katoolik ah oo muxaafid ah, L'Osservatore Romano, tan iyo markii astaanteeda, Unicuique suum - "Mid walba, tiisa" - ay ka muuqato dhabarka filinka. Oo wuxuu isku tuuraa nolosha deriskiisa.
Buugagtan dambiyada midkee baa dareenkaaga soo jiita inta badan? Miyaad hore u akhriday mid ka mid ah qorayaashan cusub ee ciqaabta ah? Nala wadaag sheekooyinka dambiyada ee aad beryahan ku raaxeysaneysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » 6 buug-gacmeedyo dembi ah oo kuu yimaada inay ku xijiyaan
Sida looga saaro wasakhda yaanyada